ဗလီထဲတွင် ရိုဟင်ဂျာများ လူလက်နက်စုဆောင်းလျက်ရှိ ~ Myanmar Express
From : ဒီမိုမုတ်ဆိတ်
စစ်တွေမြို့ မောလိပ်ရပ်ကွက် ဗလီကြီးတွင် ဘင်္ဂလီမူဆလင်များသည် လွန်ခဲ့သော သောကြာနေ့မှ ဘုရားဝတ်တက်ရန် ဗလီကြီးအတွင်းသို့ ၀င်ရောက်ပြီးကတည်းက ပြန်ထွက်လာခြင်းမရှိဘဲ ဗလီထဲတွင်လည်း လက်နက်များ ရှိနေကြောင်း တပ်မတော်မှ သတင်းရရှိသည်။
“စစ်တွေ မောလိပ်ရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့ ဗလီကြီးထဲကို ဘင်္ဂလီမူဆလင်တွေ ရှေ့အပတ်သောကြာနေ့ကတည်းက ၀တ်တက်ဖို့ဝင်သွားကြတာ ခုထိ ပြန်ထွက်လာခြင်းမရှိတာရယ်၊ အဲဒီဗလီထဲမှာ လက်နက်နဲ့ လူအင်အားတော်တော်များများ ရှိနေတယ်လို့ အခုစစ်တပ်ကသတင်းရလို့ အဲဒီဗလီကို စစ်သားတွေနဲ့ လုံထိန်းတွေပေါင်းပြီး ၀ိုင်းထားကြတယ်”ဟု စစ်တွေဒေသခံတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ကိုကျော်မိုးမြင့်က ပြောပြသည်။ Myanmar Express Posted in: သတင်း
This mosque looks the extension will be built at night. Be careful.
နှမဇောင်း ကုလားတွေ သေဖို့ သာပြင်ထား စစ်တွေကို ပြန်လာခဲ့ မယ် ......
11 June 2012 22:22
BBC, VOA, RFA, DVB ဒီကောင်တတွေဟာ အခုမှ လိမ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ အရင့်အရင် ကတည်းက လိမ်နေတာပါ။ ပိုက်ဆံရပြီးရော အီးမှန်းမသိ ချီးမှန်းမသိတဲ့ ကောင်တွေဟာ ဒီကောင်တွေထဲမှာ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်ပါတယ်။ အမျိုးချစ်စိတ်ဆိုတာ ဘာမှန်းမသိတဲ့ ကောင်တွေပါ။ ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား ဟေ့ကောင်တွေ ။ အရင်စစ်အစိုးရလက်ထက်က အစိုးရမကောင်းကြောင်းကို ပြောပြီး ငတတ်ပကြီးတွေလုပ်နေခဲ့တာပါ။ အခုတော့ အင်တာနက် ကျယ်ပြန့် လာတာကြောင့်ရော မီဒီယာ အထိုက်အလျောက် လွတ်လပ်ခွင့် ရလာတာရော ကြောင့် သူတို့ စားပေါက်ခွင် ပိတ်ပြီး သူတို့ ကို ပိုက်ဆံပေးထားတဲ့ ခွေးကုလားတွေဘက်က ဖင်ပိတ်ပြီး လိုက်ရေးပေးနေတာ။ မင်းတို့ လည်း မြန်မာ့မြေပေါ်ကို ခြေချဖို့ မကြိုးစားပါနဲ့ ။ငါတို့ မြန်မာနိုင်ငံ ဟာလည်း သူများနင်းပြား ဘ၀ကလွတ်လာပြီး နိုင်ငံတကာမှာ တူတူတန်တန်ဖြစ်လာခဲ့ရင်လည်း မင်းတို့ အတွက် နင်းစရာမြေမပေးနိုင်ဘူး၊ ရှူရှိုက်စရာ လေပေးမသုံးနိုင်ဘူးဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံသား စစ်စစ်များကိုယ်စား သတိပေးလိုက်ပါတယ်။ မင်းတို့ လိုကောင်တွေဟာ ခွေးကုလားတွေထက် ပိုရွံဖို့ ကောင်းတယ်။
11 June 2012 23:05
ငါတို့ သွေးချင်းရခိုင်ပြည်ကို မီးဟုန်းဟုန်းတောက်အောင် မီးလောင်တိုက်သွင်း မွတ်ဆလင်မ်ဂျီဟတ်ဘာသာရေးစစ်ဆင်နွဲနေကြတဲ့အစွန်းရောက်မွတ်စလင်မ်များအစွန်း မရောက်တရောက် မွတ်စလင်မ်များ အစွန်း ရောက်ခါနီးနေသော မွတ်စလင်မ်များ အားလုံးကို သုတ်သင်ကြလော့အထူးသဖြင့် မွတ်ဆလင်ဧ။်ခွေးများကို သုတ်သင်ကြလော့။ မွတ်စလင်မ်မိုးသီးဇွန်၊ မွတ်ဆလင်မ်ဧ။်ခွေး လွဏ်းဆွေရခိုင်ပြည် သည် ဂျီဟတ်စစ်မြေပြင် ဖြစ်နေပါပြီငါတို့ သွေးချင်းရခိုင်ပြည်ကို မီးဟုန်းဟုန်းတောက်အောင် မီးလောင်တိုက်သွင်း မွတ်ဆလင်မ်ဂျီဟတ်ဘာသာရေးစစ်ဆင်နွဲနေကြတဲ့မွတ်စလင်မ်များ အားလုံးကို အဆုံးတိုင်အောင် တိုက်ကြလော့
12 June 2012 06:12
Rakine tin ma ka woo Yangone Mandalay toit bar tite pwel win ya par laint malရာဇ၀င် သာကီနွယ်ဖွား မြန်မာအပေါင်းတို့ ထကြကုန်လော့....ထကြလော့ ငါတို့ပြည်ဖွား မြန်မာတိုင်းရင်းသားများ သည် ငါတို့သွေးသားဖြစ်လေ၏။ သွေးသားရင်းချာ ထိလာပါက အမျိုးမစစ်ကောင် ဘင်္ဂလီတွေကို အသွေးညှစ်၍ အသားယူရန် ငါတို့ဓားတွေ ဦးထောင်ကြလော့။
ဖင်မယားပါနှင့်(သက်ဆိုင်ရာသတင်းဌာန၏ မူရင်းရေးသားချက် သာဖြစ်သည်)